CIRC waxay ka falcelisaa Dabka Degmadda Boulder ee naxdinta leh - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > In News > CIRC waxay ka falcelinaysaa Dabka Degmada Boulder ee naxdinta leh
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado (CIRC) ayaa soo saaray bayaankan soo socda si ay uga jawaabaan dabkii naxdinta lahaa ee Degmada Boulder:
“Waan la murugooneynaa dadkii ku dhintay masiibadan, isbaheysigayaguna waa Qalbidhagax oo ka dhashay dabkii khasaaraha geystay ee ka dhacay degmada Boulder. Waxa ay ahayd in ay noqoto wakhti farxadeed oo lala kulmo asxaabta iyo qoyska oo loo dabaaldego sanadka cusub taas bedelkeed waxay noqotay wakhti ay ku naf waayeen kumanaan qof oo bulshadeena ah. Waayida nolosha, guryaha, iyo meheradaha waa wax aad u xun waxaanan ka shaqaynaynaa sidii aan u keeni lahayn agab aan ku caawino bulshooyinkeena si ay u bogsadaan.
CIRC waxaa ka go'an inay si wadajir ah ugu biiraan bulsho ahaan si ay u caawiyaan qoysaskan iyo dhammaan dadka ay dhibaatadu saameysey inay dib u soo kabtaan oo ay dib u dhistaan ​​noloshooda. Waxaan bogaadinaynaa jawaabta degdega ah ee dawladda hoose, gobolka iyo federaalka, ururada maxalliga ah, iyo xubno badan oo deeqsi ah oo ka tirsan bulshada, kuwaas oo gacan ka gaystay badbaadinta nolosha, furay guryahoodii, oo u fidiyay gargaar kumanaanka qof ee uu saameeyay Dabka Marshall. Kuwa raadinaya agab ama siyaabo ay wax ugu soo celiyaan bulshadeena, fadlan fiiri hagaha kheyraadka oo ay soo diyaariyeen saaxiibadeena iyo xubnaha CIRC ee Guddiga Adeegga Saaxiibada Mareykanka.
Waxaa naga go'an inaan la shaqayno hay'adaha u adeega soogalootiga iyo dawladaha hoose si loo hubiyo taas Qofna ma tago isagoon helin gargaar iyo taageerada soo kabashada ee ku salaysan xaaladdooda socdaalka, luqadda ay ku hadlaan, ama arrin kasta oo kale. Waxaan ku dhiirigelinaynaa qof kasta oo ka walaacsan caqabadaha ama la kulmay caqabadaha helitaanka gargaarka iyo taageerada soo kabashada inuu waco khadka tooska ah ee Shabakadda Jawaabta Degdegga ah ee Colorado 1-844-864-8341.
Waxaan aad uga xunnahay in gobolkeennii quruxda badnaa uu mar kale dab kale baabi’iyay. Iyadoo cimiladu ay sii kululaaneyso, waxaan ka baqeynaa in tani aysan noqonin markii ugu dambeysay ee lagu qasbo inaan u barooranno masiibooyinkan oo kale. Anagoo ka shaqaynayna dib u hagaajinta iyo hagaajinta bulshadeena, waxaanu sidoo kale ugu baaqaynaa masuuliyiinta la doortay ee guud ahaan dalka iyo dalkaba inay ogaadaan khatarta degdega ah ee uu keenayo is bedelka cimiladu, si deg deg ahna aanu u guda galno sidii loo joojin lahaa waxyeeladaasi, dhamaanteenna aanu ilaalinayno”.